Tinogona kupa zvakagadziriswa masevhisi emhando yepamusoro crane nylon pulleys mune akasiyana masitayera uye maratidziro sezvaidikanwa |
Chigadzirwa zita: Elevator nylon pulley Kugadziriswa: jekiseni kuumbwa / centrifugal kukanda / CNC kugadzirisa
Jekiseni: centrifugal kukanda
(1) Yakakwira simba, inokwanisa kutakura mutoro kwenguva yakareba;
(2) Kugadzikana kwakanaka, inokwanisa kukombama isina deformation, uku uchichengetedza kuomarara uye kuramba zvinokanganisa zvinodzokororwa;
Kupa Mazano: 3000 zvidimbu nylon crane pulley pamwedzi
Yepamusoro-simba zvinhu zvenaironi zvinhu zvesimbi-degree rayo, kuomarara kwakanaka, yakadzika zvinokambaira abrasion uye kugadzikana kwemakemikari kunozivikanwa. Pamusoro peiyo MC nylon ine chinhu chakajairika cheiyo zvinhu zveyiloni, nekuda kwehuremu hwayo hwemaseru, kukwirira kwakakwenenzverwa, michina zvivakwa zvine simba kwazvo remuchina kupfuura avhareji ka1.5 iyo yenyloni. Kupfuura zvakajairika mapurasitiki epurinjini.
inoshandiswa zvakanyanya mumakireni, zvigadzirwa zvekuchera, cranes, chiteshi chengarava uye mimwe michina inorema.
1, yakakwira michini simba, inogona kuiswa kune yakakura- mijenya michini;
2, pfeka; yakanaka yekuzvizora mafuta, MC nylon pulley yekupfeka hupenyu kupfuura iyo simbi, iron, pulley 4-5 imes yakakwira.
3, pasina kukanganisa zvinhu zviviri, kugadzirwa kwemichina yekusimudza, tambo yesimbi tambo yehurefu hwekupfeka hupenyu ka10;
4, kuti ienderane nehupamhi tembiricha renji, -40 ° C -100 ° C iri kushandiswa;
5, simba kudzora, hapana ruzha, kumeso kushanda.
6, nekuzvidzima-wega, kushandiswa kwekuchengetedza;
7, mwenje, kuwanda kwesimbi 1/7, mhangura 1 / 8,1 / 2.5 aluminium, isina ngura, kwete ngura;
8, mashandiro anoita, kugadzikana kwepamusoro kwechimiro.
Pashure: Chinjana indasitiri kuti ibudise mavhiri epamusoro epayiloni
Zvadaro: Yakareba-hupenyu mc nylon inotsvedza ndeyemhando yepamusoro uye yakasimba
Nylon pulleys inotengeswa
Nylon inosunga mapuleti
Chinjana indasitiri kuburitsa yepamusoro nylon ...